MDC-T Inoti VaMnangagwa Vanofanirwa Kuona Kuti Hurumende Yavo Yavandudza Mitemo yeSarudzo
MDC-T officials and supporters.
Mumwe wevatevedzerivemutungamiri weMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, Engineer Elias Mudzuri, vanoti sebato rinoremekedza mitemo nekodzero dzevanhu, vanotarisira kuti mutungamiri mutsva wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, kuti vachagadzirisa mitemo inombunyikidza kufambiswa kwesarudzo kwakanaka.
Vachitaura vari kumucheto kwemhemberero dzekutoreswa mhiko kwaVaMnangagwa, VaMudzuri vati hurumende itsva inofanirwa kuremekedza kodzero dzevanhu vese kuitira kuti munyika muite zvinhu zvinofambira mberi.
VaMudzuri vanoti tarisiro yavo ndeyekuti VaMnangagwa vaone kuti mitemo isiri kuenderana nebumbiro remitemo yenyika yagadziriswa, dzinhepfenyuro nemapepanhau ehurumende zvoshandawo zvichiremekedza mapato ose pasina rusara.
VaMudzuri, avo vakambova meya weHarare akaita mukurumbira asi vakazobviswa nehurumende yeZanu PF nenzira isina kutsarukana, vanoti VaMnangagwa vanofanirwa kuziva kuti vanhu vakaenda mumigwagwa vachivatsigira vakawanda vacho vakange vari vemasangano akazvimirira pamwe nevemapato anopikisa.
VaMudzuri vanoti vari kutarisira kuti panoitwa sarudzo gore rinouya, hurumende yaVaMnangagwa inenge yagadzirisa pamwe nekuvandudza mitemo inobata nyaya dzesarudzo.